Safaaradda Maraykanka Riyad oo Howlihii Hakisay
Safaaradda Maraykanka ee magaalada Riyaad ee dalka Sucuudi Careebiya ayaa joojisay hawlihii qusuliyadda. Hawlahan joogsaday ayaa Axadda maanta ah iyo Isniinta barrito ah ka dhaqan galaya magaaalooyinka Riyaad, Jeddah iyo Dahraan, welwel dhinaca amniga ah dartii.
Warbixin soo baxday Sabtidii shalay ayaa safaaraddu ku sheegtay in khadadka telefonku ay xirnaan doonaan 15ka iyo 16ka bishan March oo ah maanta iyo berri oo Isniin ah.
Safaaradda ayaa muwaadiniinta Maraykanka kula talisay inay joojiyaan safarada aan lagama maarmaanka ahayn ee ay Sucuudiga ku tagayaan, isla markaana ay taxadar weyn muujiyaan marka ay dalka ku dhex socdaalayaan.
Warbixinta ayaanan sii faahfaahin sababta taxadarka dheeriga loo qaatay. Warbixintu waxay, sidoo kale, dadka Maraykanka ah kula talisay inay ka fogaadaan meelaha lagu xoonsan yahay, isla markaana ay sii calaamadeystaan meelaha ay Sucuudiga kaga bixi lahaayeen haddii xaalad degdeg ahi dhacdo.